Wehelka nagaha galmada cusub - Hablaha Media Network
Wehelka nagaha galmada cusub
HMN:- Sideedaba hadii aynu nahay noole waxa aynu leenahay baahi badan oo u baahan in wax laga qabto. Baahida aan qabno ayaa sida jaranjarada ukla saraysa. Midiba mida ay ka adagtahay ayay ka horeysaa.
Hadaba ta ugu horeysa, uguna muhiimsan ayaa ah baahida jirka, taas oo ah in uu qofku helo cunto, biyo, guri iyo raaxo guur. Waxa kale oo aad u muhiim ah in aad ogaatid in sida jirku cunto ugu baahan yahay, uu ugu baahan yahay salaaxida gacmo diiran oo siiya dareen macaan.
Waxa jirta in aad leedahay qayb ka mid ah jirkaaga oo sida qasnada oo kale ah oo aanu ogaan karin sayigaagu hadii aanad furaha siinin. Taas waxa aan uga jeednaa in aad u sheegtid sida aad doonaysid in uu kuugu raaxeeyo farxadna kuusiiyo.
Inta badan waxa aad moodaa in uu qof waliba ogyahay qaybhiisa dareenka badan ee uu leeyahay, laakiin waligaa ma ka fikirtay sida kilikilada ama xundurta ayaa ah qaybo dareenka raaxada leh meel dheer gaarsiiya.
Gabagabadiina waxa aan idin leenahay sidaa iyo qoys lagu reeyo noqda.